M/weynaha Somaliland oo socdaal ugu dhoofay dalka Jabuuti, Maxayse ka wada hadlayaan labada dhinac?
HARGEYSA(P-TIMES) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta socdaal ugu ambabaxay dalka Jamhuuriyada Jabuuti, iyadoo uu ka helay casumaad rasmi ah dawladda Jabuuti, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya ujeedada safarka xiligan.
Madaxweynaha Somaliland ayaa lafilayaa in ay wada hadalo yeeshaan Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay ka wada hadli doonaan xariirka ka dhaxeeya, ka sokow wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland.
Warar hoose ayaa sheegaya in sidaas oo kale labada dhinacba ay soo qaadi doonaan arrimaha la xariira Iskaashiga gobalka ka socda iyo damaca dawladdaha qaarkood ay ka leeyihiin, gaar ahaana marka laga hadlayo maalgashiga ay wadamada Carbeed ka hayaan Soomaaliya.
Madaxweynaha Somaliland ayaa lafilayaa in uu marka uu ka soo laabto safarkaas faahfaahin ka bixin doono, iyadoo ay ka soo baxayaan xogo dheeraad ah.
Ma jirto cid katirsan Madaxtooyada Somaliland oo arrintan ka hadashay, balse warar aan helnay ayaa daaha ka rogaya in isbedelada gobalka ka sokow, laga wada hadli doono dalabka Jabuuti ee ah in ay noqoto cida wada hadalsiinaysa Soomaaliya iyo Somaliland.
Somaliland oo go’aan culus kasoo saartay suuqa Forex